Baabuurkii ugu horreeyay ee duulaya, mustaqbalku waa kan | Ragga Stylish
Waxay ku dhowdahay in lagu iibiyo suuqa, sida wax soo saarka kale. Ku saabsan yahay Kitty Hawk Flyer, gaarigii ugu horreeyay ee duulaya. Waxaa lagu soo bandhigay bulshada dhexdeeda, ka dib muddo dheer oo si qarsoodi ah u horumartay.
Muuqaal ahaan, gaariga ayaa umuuqda inuu yahay isku dhafka u dhexeeya skis jet iyo maraakiibta shaqsiga ka duulaya ee Star Wars.
Farsamo ahaan, Kitty Hawk Flyer waa koronto, miisaanka ku saabsan Miisaanka 100 waxayna u horseedi kartaa qof. Xawaareheeda ugu badan waa 40 kiilomitir saacaddii oo u duuli kara ilaa mid dhererka 4,60 mitir dusha biyaha. Mabda 'ahaan waxay u duushaa kaliya biyaha korkiisa.
Wadista gaarigaan duulaya waa mid sahlan oo dareen leh, waxaa lagu baran karaa saacado yar gudahood. Diyaaraddani waxay samayn kartaa duullimaad toos ah iyo soo degitaan.
Hadafka abuurista gaariga cusub ee duulaya ayaa ah dib u cusbooneysiinta gaadiidka dadka. Dhaliilaha mashruucu soo sawirayo, waxaa ka mid ah mowduuc laga yaabo inuu fashil ku yimaado. Ciladaha mashiinka ama cilladaha nooc kasta oo ay tahay gaariga caadiga ah, "dhulka", ayaa lagu soo dhexgelin karaa badbaadada dadka degan iyadoo loo dhaqaaqayo garabka. Laakiin a Kitty Haw Flyer failure waa shil badbaado leh, iyo in lagu daro halista qaar.
Si looga hortago isticmaaleyaasha diyaaraddan inay ka gooyaan matoorka, ama dhicitaan ama muuqaal xun, soo saarayaasha ayaa isku daray shabaq badbaadada. Sidan oo kale, isticmaaleyaashu waxay awoodi doonaan inay si ammaan ah u safraan.
Noocaas ayaa maamulka Mareykanku u aqoonsaday inuu yahay “diyaaradaha ultralight ”, in kasta oo aan loo baahnayn rukhsad duuliye wadista gaariga.
Liiska sugitaanka gaariga duulaya
Shirkadda suuq geyn doonta Kitty Hawk Flyer ayaa xaqiijisay in baabuurkan duulaya uu sii socon doono ka hor dhamaadka 2017. A liiska sugitaanka mudnaanta qofkasta oo daneynaya inuu gaariga ku tijaabiyo jilista duulimaadyada. Waxay awoodi doonaan inay sameeyaan kadib markay dhigaan boqol doolar.
Ilaha sawirka: Motor1.com / YouTube.com
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » Tiknoolaji » Baabuurkii ugu horreeyay ee duulaya, mustaqbalka ayaa halkan jooga
XNUMX Qaybo Wanaagsan oo loogu Dabaaldegayo Qandhada Muusigga T-Shirt